Shiinaha Jilicsan PVC Boorsooyinka Calaamadaha Warshadaha iyo soosaarayaasha | SJJ
Dadku waxay mar walba calaamad saaraan shandada shandadaha si ay u kala saaraan midkooda iyo kuwa kaleba. Si aad si dhaqso leh u kala soocdo boorsooyinkaaga markaad safarka ku jirto, habka ugu fiican ayaa ah inaad isticmaasho sumadda boorsooyinka PVC ee jilicsan oo leh astaan ​​kuu gaar ah ama dabeecad gaar ah.
Dadku waxay mar walba calaamad saaraan shandada shandadaha si ay u kala saaraan midkooda iyo kuwa kaleba. Si aad si dhaqso leh u kala soocdo boorsooyinkaaga marka aad safar ku jirto, habka ugu fiican ayaa ah inaad isticmaasho Summada PVC ee Jilicsan oo leh astaamo kuu gaar ah ama dabeecad gaar ah.
PVC -ga jilicsan Calaamadaha shandadahaleeyihiin faa'iidooyin badan marka la barbardhigo kuwa kale, sida birta, balaastigga adag, calaamadaha boorsooyinka alwaaxda ah ama waraaqaha ah. PVC -ga jilicsanCalaamadaha shandadahaway ka jilicsan yihiin, ka dabacsan yihiin, ka midab badan yihiin uguna qori karaan ka badan summadaha Bagaashka, farqiga ugu badan ayaa ah sumadaha boorsooyinka jilicsan ee PVC ma daxalayn doonaan ka dib isticmaalka muddo dheer. Calaamadaha Bagaashka ee jilicsan ee PVC way ka cimri dheer yihiin kuwa alwaaxa ah. Calaamadaha Bagaashka ee jilicsan ee PVC laguma jebin doono biyaha marka la barbardhigo summadaha boorsooyinka waraaqaha ah.
Astaamaha sumadaha xirmooyinka PVC ee jilicsan waxaa lagu samayn karaa 2D ama 3D, waxay ka badan doontaa kubbadaha kuwa adag ee PVC. Calaamadaha la xardhay, Debossed, midab buuxiyey, daabacay ama leesyada xardhay leysarka ayaa laga heli karaa summadaha xirmooyinka PVC ee jilicsan. Macluumaadka oo buuxa waxaa lagu daabici karaa ama lagu qori karaa summadaha jilicsan ee PVC. Suumanka maqaarku ama caaggu wuxuu kaa caawinayaa inaad si xor ah u xirto ama iska saarto summadaha boorsooyinka waqti kasta.
Ujeeddooyin: Dhimasho Dhimasho, 2D ama 3D, hal dhinac ama laba dhinac
Midabada: Midabadu waxay la mid noqon karaan midabka PMS
Dhammaystirka: Dhammaan noocyada kala duwan ee qaababka waa la soo dhaweynayaa, Logos waa la daabici karaa, waa la xardhi karaa, Laser waa la xardhay oo sidaas maya
Ikhtiyaarrada Lifaaqa Caadiga ah: suumanka caagga ah ee hufan, suumanka maqaar, suunka PU iyo iwm.
Xirxirida: 1pc/bac poly, ama sida ay tahay codsiga macaamiisha
MOQ: 100 kumbiyuutar
Hore: Coasters -ka jilicsan ee PVC
Xiga: Jijjirada PVC ee jilicsan
sumadda boorsooyinka gaarka ah
Calaamadda Rubber -ka Custom
Magaca Shandadaha Tag
PCV Alaab Tag
Tag Calaamadaha Xarkaha
tags boorsooyinka pvc jilicsan
Tag Calaamadaha Safarka
Shandadaha Golf -ka Tags
Xirmada & Xirmada Furayaasha Tags